Liposuction Mutengo muIstanbul- Ndekupi uye sei kwekutenga zvakachipa kwazvo? - Cure Kutsvaga
Aesthetic kurapwa liposuction
Liposuction Mutengo muIstanbul- Ndekupi uye sei kwekutenga zvakachipa kwazvo?
16 August 2021 16 August 2021 mushongabooking
Liposuction Mari ye1, 2 kana 3 Nzvimbo muIstanbul
Iyo liposuction muTurkey inogona kukubatsira iwe mukubvisa yakawandisa adipose tishu kubva kune dzimwe nzvimbo dzemuviri, kugadzirisa nekuvandudza muviri wako mufananidzo, uye kudzikisa chiuno chako uye zvimwe zvikamu zvemuviri.
Vazhinji vanhu vanoda chitarisiko uye chimiro chidiki, asi pasi pemafuta eganda ndicho chimwe chezvipingamupinyi zvakanyanya zvinovatadzisa kuzadzisa zvinangwa zvavo.
Nzvimbo dzedu dzekurapa liposuction muIstanbul, Turkey, inoonekwa seimwe yezvivakwa zvemberi uye zvakanakisa zvemabasa ekurapa. Usati wafunga, tinoda kutsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezvenzira dzemaposuction nemaitiro kuitira kuti uwane ruzivo rwese rwakakosha.
Ndiani Anogona uye Asingakwanise Kuwana Liposuction muIstanbul?
Liposuction muIstanbul inoenderana nedzimwe nzira uye zvinorambidzwa. Semuenzaniso, murwere anofanira kunge apfuura makore gumi nemasere uye asina chirwere chine njodzi. Nekuti mafuta edumbu haafanire kunge ari pasi pehutongi hwakanaka kana chiitiko chezvemitambo, murwere anofanirwa kuve nehuremu hwemuviri kana huremu hunokwira husingadarike makumi matatu muzana yehuremu hwake usati waiswa mudumbu liposuction. Zvakare, murwere anofanira kunge aine hutano hwakanaka uye asina chirwere chisingaperi.
Zviri nani kuti usavhiyiwa zvakadaro kana wakura zvakanyanya, sezvo ganda rinoomarara. Zvakare, zvinoenderana nematanho epasi rose, huwandu hwemafuta anotenderwa kubviswa i5-7 muzana yehuremu hwemuviri, saka kana murwere achirema 70 kg, mari inobvumidzwa kubviswa ndeye 7 litres zvakanyanya (mafuta anowanzoyerwa mumalita , kwete makirogiramu); kana huwandu hukuru hukabviswa, murwere anogona kusangana nematambudziko ane ngozi anogona kutungamira kurufu.
Mhando dzeLiposuction muIstanbul- Laser uye Vaser Liposuction
Liposuction neLaser muIstanbul
Liposuction ne laser muIstanbul inosiyaniswa nenyaya yekuti haidi kuvhiyiwa kukuru uye kungocheka mashoma. Nekuda kweizvozvo, mavanga anenge ari madiki kana zvimwe asingaonekwe, zvichipa dziviriro huru kubva kuzvirwere uye kuzvimba.
Liposuction ine laser inosarudza; inovavarira chete matunhu anoda kubviswa, zvichibvumira chiremba kuveza muviri kuti uwane kutaridzika kwakawanda.
Nekuda kwekusarudzika kwenzira, inogona kushandiswa munzvimbo dzakaomarara dzinosanganisira kumeso, chiuno, chiuno, zvidya, uye tsoka. Iyi nzira inogona zvakare kushandiswa munzvimbo dzine ganda gobvu uye kuwanda kwemafuta kuwanda.
Liposuction ine laser haingoshanda chete mukubvisa mafuta, asi inogona zvakare kusimudza ganda, ichichipa kutaridzika kwevechidiki nekubvisa kufefitera.
Nguva yekuporeswa yakadzikiswa, ichibvumira varwere kuti vadzokere kune avo aigara vachijaira nekukurumidza.
Mune iyi nzira, general anesthesia haidiwe.
Kana ichienzaniswa nedzimwe nzira, kune mashoma maronda, kuzvimba, uye kusagadzikana.
Liposuction uchishandisa laser inokonzeresa kuparara kwemafuta kupfuura mamwe maitiro.
Liposuction Mari muUK vs Turkey
VASER Liposuction muIstanbul
Maitiro aya anobatsira mukubvisa mafuta nenzira yakapfava uye inoshanda, zvichikonzera kuoneka kwakanaka uye kwechisikigo. Iyo Vaser liposuction muIstanbul yakasarudzika yemuvezi wemuviri sezvo ichigona kusimudza ganda, ichikubvumidza iwe kuti uwane fomu yakanaka uye chitarisiko.
Rudzi rwekuchera liposuction ndirwo zvakare rwakachengeteka kupfuura zvese. Inogona kushandiswa kusarudza kuputsa makuru kana madiki mafuta, kudzivirira kukuvara kune mamwe matishu ane hutano. Zviuru zvevarwere vakasarudza VASER senzira yakachengeteka uye inoshanda kwazvo yekubvisa mafuta emuviri.
Vanhu vazhinji vanofarira maitiro aya, uye ivo nenzira yechisikigo vanoda kuziva yakadii liposuction inodhura muIstanbul. Nekudaro, iwe uchinge uchitsvaga kuti yakawanda sei liposuction inodhura, ramba uchifunga kuti mutengo unosiyana zvichibva nemaitiro anoshandiswa, pamwe nekuwanda kwemafuta anozoda kubviswa uye matunhu ekurapwa.
Semuenzaniso, mutengo wacho unosiyana zvichienderana nekuti tirikurei nemhuru yekuchera mafuta, chinosungirirwa, mabvi eposuction, mukati mehudyu liposuction, mutsipa liposuction, zamu liposuction, dama liposuction, kana ankle liposuction yakaitwa. Kupfuurirazve, iyo liposuction maitiro muUK ichagara ichidhura kupfuura maitiro muIstanbul.
Muchokwadi, Turkey, kunyanya Istanbul, ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo pasirese yerudzi urwu rwekurapa kwekuzora, nekuda kwenzvimbo dzakaomesesa dzenyika uye vane hunyanzvi uye vane hunyanzvi.
Hazvisi chete nekuda kweizvozvo; zviri zvakare nekuda kwemitengo yakaderera. Chimbofunga kudhura kwemalipuction muUnited Kingdom. Zvichakadaro, liposuction muTurkey inodhura avhareji ye £ 5,000, nemitengo iri pakati pe £ 12,000 kusvika £ 2,700. Izvi zvinoreva kuti, mutengo we liposuction muUnited Kingdom ndeye 1,200 kusvika ku4,200 zvakapetwa kupfuura muTurkey.
Zvakare, ramba uchifunga kuti iyo mitengo ye liposuction mapakeji rine mamwe mabasa ekuwedzera.
Isu tinopawo zvivakwa zvekucheka pane chimwe chezvipatara zveTurkey zvakanakisa uye zvazvino uno, nevashandi vekurapa vane hunyanzvi uye vanovhiya vane hunyanzvi. Ndokumbirawo usazeze kutibata nesu yemahara, isina-yekusungirwa fungidziro: isu tinovimbisa kuti mitengo pamwe neyekutanga uye shure kwemifananidzo yemalosuction ako ichakushamisa iwe.
Chii Chinosanganisira Liposuction Mapakeji Kusanganisira muIstanbul?
Liposuction mapakeji muIstanbul inosanganisira kuvhiya kana maitiro, kubvunza nachiremba anovhiya, kuongorora kwakakodzera, kutindivadza (zvemuno kana zvakajairika, zvinoenderana nerudzi rwekuvhiya), zvinodyara (kana kuvhiyiwa kuchizoda ivo), mishonga yese panguva yekugara kwako mukiriniki, kugara kwehusiku humwe mukiriniki ine chikafu (kana zvimwe, kana zvichidikanwa), pekugara muhotera nechingwa chamangwanani, musangano, uye kuona kure.
Liposuction ye1 Area Mutengo muIstanbul kutanga kubva- 1,800 €
Liposuction yenzvimbo mbiri Mari muIstanbul kutanga kubva- 2 €
Liposuction yenzvimbo mbiri Mari muIstanbul kutanga kubva- 3 €
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve laser uye vaser liposuction muTurkey.
Cosmetic Surgery Neck Simudza muIstanbul Mari- sei ma…
Kuwana Liposuction muTurkey: Mari, Inodhura…
Nei uchiwana Septorhinoplasty muIstanbul, Turkey?…
Kudzokorora Rhinoplasty Kuvhiya muIstanbul: Mari,…
Zvinodhura zvinodhura zveFace Lift muIstanbul, Turkey-…
Kuwana Tummy Tuck vs Liposuction muTurkey: Ndeipi…
← Cosmetic Surgery Neck Simudza muIstanbul Mari- Maitiro Ekutora Yakachipa Kwazvo?
Tummy Tuck Mutengo muIstanbul Turkey- Mini uye Yakazara Abdominoplasty →